मानिसहरुलाई डिप्रेसनका के कारणले हुन्छ ? यो कस्तो खाले रोग हो ? लक्षण, समस्या, सामाधान देखी परिवारले बिरामीलाई के गर्ने ? सबैजानकारी एकै पटक लिनुहोस ... - Sudur Khabar
मानिसहरुलाई डिप्रेसनका के कारणले हुन्छ ? यो कस्तो खाले रोग हो ? लक्षण, समस्या, सामाधान देखी परिवारले बिरामीलाई के गर्ने ? सबैजानकारी एकै पटक लिनुहोस …
Total Reader : 30
मानिसहरुलाई डिप्रेसनका के कारणले हुन्छ ? यो कस्तो खाले रोग हो ? लक्षण, समस्या, सामाधान देखी परिवारले बिरामीलाई के गर्ने ? सबैजानकारी एकै पटक लिनुहोस … उदास, दुःखी, बोर वा दिक्दार अनुभव हुँदैमा डिपे्रसन भएको बुझ्न मिल्दैन। तर, यसरी उदास अनुभव हुनु मनोरोगको प्रमुख लक्षण भने अवस्य हो। मनोरोगको लक्षण मानिने उदास अनुभवलाई धेरैले रोगकै अंश हो कि प्रतिकूल परिस्थितिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनीे छुट्याउन सक्दैनन्। जसले गर्दा समस्याको पहिचान र उपचारमा कठिनाइ हुनेगर्छ।
धार्मिक दृष्ट्रीले प्रशिद्ध रहेको तुलसी सेवनबाट चिसो मौसमका लागि अमृत समान फाईदाहरु जानकारी लिनुहोस …
कतै तपाईको स्वास गन्हाउने समस्या आउदै त छैन ? छ भने यसरी घरायसी पद्धतीबाट पनि निर्मुल पार्न सकिने …
शरिरका जोर्नी,घुडा,कुहिनामा दुखाई भईरहेको छ भने घरायसी औसधीको रुपमा कागतीको प्रयोगले यसरी पार्न सकिन्छ निर्मुल …